आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, कति पुग्याे ताेलाकाे ? « dainiki
९ मंसिर २०७८, बिहीबार ११:३७
आज पनि घट्यो सुनको मूल्य, कति पुग्याे ताेलाकाे ?
९ मंसिर, काठमाडौँ । साताको पाँचौँ दिन बिहीबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार बुधबार छापावाल सुन प्रतितोला ९१ हजार ८०० रुपैयाँ कायम भएकोमा बिहीबार १०० रुपैयाँले घटेर प्रतितोला ९१ हजार ७०० रुपैयाँ कायम भएको हो ।
प्रकाशित मिति: ९ मंसिर २०७८, बिहीबार ११:३७
१२ मंसिर, काठमाडाैँ । सुनचाँदी बजारमा साताको पहिलो कारोबार दिन आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला
आज पनि घट्याे सुनको मूल्य, कति पुग्याे ताेलाकाे ?
८ मंसिर, काठमाडौँ । बुधबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका
सुनचाँदीकाे मूल्य घट्यो, यस्ताे छ आजकाे बजार भाउ
७ मंसिर, काठमाडौँ । साताको तेस्रो दिन मंगलबार नेपाली बजारमा सुनचाँदीको मूल्य घटेको छ । नेपाल
बढ्याे सुनकाे मूल्य, कति पुग्याे ताेलाकाे ?
६ मंसिर, काठमाडाैँ । सुनचाँदी बजारमा आज छापावाल सुनको मूल्य प्रतितोला रु २०० ले बढेर